निर्वाचन आयोग एमाले बिरुद्ध छ, मतपेटिकालाई आँखाबाट ओझेल हुन दिनुहुन्न : ओली | Birat Khabar
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग र पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबीच साँठगाठ भएको आरोप लगाएका छन्।
पार्टी पोलिटब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘हाम्रो पार्टी विभाजन गर्न सभामुखले र निर्वाचन आयोग पनि लागेको प्रष्ट देखियो। अरूको चाहिँ व्यक्ति गरेको कारवाही सभामुखले सूचना टाँसेको छ। हाम्रो केन्द्रित कमिटीको निर्णयलाई चाहिँ सभामुखले लम्ब्याउने र उतातिर निर्वाचन आयोगको दल दर्ताको हतारो।’
पार्टी विभाजन गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले सत्ता गठबन्धनमा भित्रभित्र कुरा मिलाएको प्रष्ट देखिएको उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले स्वेच्छाचारी ढंगले मतपत्रको रङ परिर्वतन गरेको आरोप लगाए।
ओलीले भने, ‘दलहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ। रङ परिवर्तन किन भयो? कस्तो स्वेच्छाचारिता निर्वाचन आयोगले गठबन्धनसँगको छलफलमै गरेको हो। रङको कारणले कन्फ्युज भयो रे। रङ बदलेर हरियो किन राख्ने? हरियो रुख नै किन राख्ने? अरुको चाहि नमिल्ने रहेछ क्यारे। सूर्य कसरी हरियो हुन्छ। हामीलाई रातो बनाइदेऊ न त्यसो भयो।’
निर्वाचन आयोगको क्रियाकलाप भरतपुर र सिरहा काण्ड जस्तै देखिने शंका उत्पन्न भएको बताए। ‘हामी निर्वाचनको तयारीमा जाँदैछौँ। हामीले मतपेटिका आँखाबाट ओझेल पार्न दिँदैनौँ। हाम्रो आँखा अगाडि मत हाल्नुपर्छ। मतपेटिकाे सुरक्षा हुनुपर्छ। मतगणना नभएसम्म हामी छाड्दैनौँ’ ओलीको भनाइ छ।
उनले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता माथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। ओलीले भने, ‘मनोनयनसँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण छैन। कार्यकारिणी पद रिक्त राखेर जनताको सेवा गर्न सकिँदैन। केन्द्र र प्रदेशमा राजीनामा गर्नु नपर्ने तर, स्थानीय तहमा राजीनामा गर्नुपर्ने किन? गर्नुपर्ने? निर्वाचन सार्नको लागि प्रयास भइरहेका आरोप लगाए।